Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarol
Yiza uhlale nam kwaye uphumle kwigumbi lam lokulala elinegumbi elinye, elikwindawo ezolileyo enobuhlobo kwi-Airport Heights. Ngokumalunga nemizuzu emithathu ukuya kwisikhululo seenqwelomoya kunye noHola weTrans Canada, malunga nemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ukuya kwiindawo zokuthenga, iivenkile zegrosari, izibhedlele, iibhanki, iindawo zokutyela, edolophini, iMile One Stadium kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi. Ndiqhelene kakhulu neSt. John's kwaye ndingakunceda ngesicwangciso sakho okanye ndikunike iingcebiso ngendawo onokuya kuyo ngokuxhomekeke kwizinto onomdla kuzo.
Indawo yam inebhedi enye ephindwe kabini, umatrasi womoya we-queen (ubude obuphindwe kabini) okanye oomatrasi bomoya ababini (ubude obuphindwe kabini). Nangona ifaneleka kakhulu kubini, inokuhlala ukuya kuthi ga kubantu abane ngentlawulo eyongezelelweyo yeedola ezili-10 ngobusuku kumntu ngamnye emva kwesibini. Umntu owongezelelekileyo angabandakanya nabani na, ngaphandle kosana/umntwana osemncinci.
Ndibonelela ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke iziseko, kubandakanywa iintlobo ezahlukeneyo ze-condiments, izinongo, ikofu, iti kunye nokutya. Kukwabandakanywa i-wifi, intambo, iwasha/idryer, umenzi wekofu, ifriji, isitovu kunye nemicrowave.
Kukho indawo yokupaka yabucala enye, kubandakanywa neendawo zokupaka ezitalatweni ixesha elininzi lonyaka (ngaphandle kokuba ukuvalwa kokupaka ubusika kwesi sixeko kusebenza). Kukho indlela egangathiweyo ngakwicala lasekhohlo lendlu elikhokelela ekungeneni, elinesitshixo sokungena.
**Udonga lwesamente nomgangatho ophumela ngaphandle kwesango lika-Airbnb zisalungiswa.
4.97 · Izimvo eziyi-39
Indawo ezolileyo, enobuhlobo kunye nekhutheleyo enabantu abahamba rhoqo, ababalekayo kunye neebhayisekile. Iindawo zokudlala kunye neendlela zokuhamba zikufutshane kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Carol
I am a retired teacher, taking some time to relax, enjoy life, meet new people and plan the next phase of my life.
Sobabini nentombi yam sihlala kwigumbi eliphezulu. Singaqhagamshelwa nanini na ngetekisi. Sikwamkelekile kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho nathi kuyinto eyonwabisayo.
Siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye asiyi kunkqonkqoza emnyango wakho. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuzazisa okanye uze kwigumbi eliphezulu ukuze ufumane ikofu kunye nencoko, sivuleleke kakhulu kuloo nto, ngokunjalo. Ndiyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kwaye ndive amabali anomdla ekufuneka wabelane ngawo.
Sobabini nentombi yam sihlala kwigumbi eliphezulu. Singaqhagamshelwa nanini na ngetekisi. Sikwamkelekile kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho nathi kuyinto eyonwabisayo…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$156
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- St. John's